Calaamada wiil ka dhalan doona gabadh Bikrad ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Soo Bandhigida Sabuur, Waxaan soo sheegnay in Nabiga iyo Boqorka Daa’uud (NNKH) bilaabay Sabuur loo waxyooday qorraalkii kitaabkii Sabuurrada ee Sabuur, iyo in buuggaagta kale ayaa markaas lagu daray nebiyadii ka dambeeyey. Nebi aad u muhiim ah, loo arkaa in uu ka mid yahay nebiyada waaweyn (sababtoo ah buuggiisu uu aad u dheer yahay) ahaa Ishacyaah. Waxa uu noolaa muddadii 750 BC. Jadwal Taariikheedka hoose wuxuu muujinayaa markii Ishacyaah noolaa marka la barbardhigo nebiyada kale ee Sabuur. Jadwal Taariikheedka Nabiga Ishacyaah (NNKH) oo leh qaar ka mid ah nebiyadii kale oo Sabuur
Jadwalka Historical Nabiga Ishacyaah/Isayaah (SCW) iyo qaar ka mid ah nebiyadii kale oo Zabur – arki Isayaah
In kastoo Ishacyaah uu noolaa waqti dheer (oo ku saabsan 2800 sano ka hor) wuxuu sameeyey wax sii sheegid badan oo saadaalinaya dhacdooyinka mustaqbalka, sida nebi Muuse (NNKH) horay ayaa lagu sheegay nebi baa imaan doona.
Waxayigiisa ayaa sii sheegay calamadaha mucjisooyinka ka leh sida Suraat At-Taxriim ( Suraat 66- Maamnuucid) ayaadaha 12 ayaa xoojinayaa.
Maryama bintu cimraanna xusuusta ee isdhawrtay, markaas malagu jeebka ka afuufay, rumaysayna Sharciga Eebe iyo Kutubtiisaba, kana mid noqotay kuwa Eebe adeeca. (Suurat At-Taxriim 66:12)
Maxay sharaxaysa Suurada At-Taxriim? Waxan aaynu dib u jaleecayna sharaxadii Nabi Ishaacyaha.
Sida loogu sharaxay soo Bandhigida Sabuur, boqorradii ka dambeeyey Suleemaan (NNKH) waxay ahaayeen kuwo shar leh, oo taasuna waxay ahayd mid dhabta ah waqtigii Boqorradda Ishacyaah. Sidaas buuggiisa waxaa ka buuxa digniin imaanshaha xukunka soo socda (oo dhacay muddo dhan 150 sano ka dib markii Yeruusaalem la burburiyey oo ay burburiyeen Baabuloon). Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale wuxuu sii sheegay in meel ka durugsan oo si u qoto dheer u eegay mustaqbalkiisa markuu Ilaah diri doono calaamad gaar ah – marnaba weli u dirin aadanaha. Ishacyaah wuxuu la hadlayaa Boqorka Israa’iil, waa kuwa faraca Daa’uud (NNKH), taas oo ah sababta calaamadan lagu soo hagaajiyay ‘Aqalka Daa’uud’ (Dawood) Oo isna wuxuu yidhi, “Reer Daa’uudow, bal haatan i maqla, ma wax yar bay idinku tahay inaad dadka daalisaan?
Oo weliba Ilaahaygana miyaad daalinaysaan? Haddaba Rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona. Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta, oo waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu’eel. Wuxuu cuni doonaa subag iyo malab, ilaa uu aqoonsado inuu sharka diido oo wanaagga doorto. (Ishacyaah 7: 13-15)
Tani waxay ahayd hubaal saadaal geesinimo leh! Yaa abid maqlay naag bikrad ah oo wiil dhashay? Waxa ay u muuqatay sida saadaasha cajiib ah in sanado badan dad yaabay haddii ay jiraan wax qalad ah. Dhab ahaantii, nin si fudud u samaynaya male oo ku saabsan mustaqbalka ma sheegi karin – oo horay u qoray, waayo, qof kasta oo ka soo jeeda abkii tagay inuu wax akhriyo – sida saadaasha ah u muuqda wax aan macquul aheyn. Laakiin waxaa ay ahayd. Oo Badda Dhimatay ka jira maanta waxaynu og nahay in wax sii sheegiddan waxaa dhab ahaantii muddo dheer ka hor qoraalka la qoray – boqolaal sano ka hor Ciise (NNKH) intuusan dhalan.
Ciise Masiix (NNKH) waxaa la sii sheegay in uu ka dhalan gabadh Bikrad ah
Waxaan maanta, nool ka dib markii Ciise Masiix (NNKH), waxaan ka arki karnaa in ay ahayd wax sii sheegid soo socda. Nebi kale oo ku dhashay sidan ma jiro, xitaa haddii lagu daro Ibraahim, Muuse iyo Muxammad (NNKH) ka dhashay gabadh bikrad ah. Ciise Kaliya (NNKH), aadanaha oo dhan ee abid ku dhashay, ayaa dunida ku yimid sidan. Markaasaa Ilaah, boqolaal sano ka hor inta uusan dhalan, waxaa uu na siinay calaamad uu soo socdo iyo ayaa sidoo kale isku diyaarineysa in aan barano wax ku saabsan inanka soo socda ee gabadh bikrad ah dhali doonto. Waxaan xusi laba waxyaalood si gaar ah.
Ugu Yeedhay ‘Cimmaanuu’eel hooyadiis
Koow, wiilka soo socda ee gabadha bikrada ah dhashay waxaa hooyadiis ugu yeedhi doontaa “Cimmaanuu’eel ‘. Magaca kani waxaa macne loola jeedaa ‘Ilaah baa inala jooga “. Laakiin maxay taasi macnaheedu yahay? Waxay u badan tahay in ay leedahay dhowr macne, laakiin tan iyo markii uu wax sii sheegiddu lagu dhawaaqay in ay boqorrada xun in uu Ilaah xukumi doono wakhti dhaw, mid macnaha muhiim ahayd in marka wiilkan u dhalan doono waxa ay ahayd calaamad in Ilaah uusan ka soo horjeedin mar ahaa laakiin ‘Ilaah baa la joogay’. Markii Ciise (NNKH) uu dhashay, waxay u muuqatay dhab ahaantii sida reer binu Israa’iil u qaateen in Ilaah maadaama uu cadoowgoodu uu xukumayey. Dhalashada wiilka ee gabadha bikrad ahayd waxay ahayd calaamad in Ilaah baa la joogay, iyaga ka gees ah ma ahayn. Dhab ahaan, Injiilka Luukos diiwaan geliyey in hooyadiis Maryam (ama Mary) ku heestay heeso xurmadeed markii malaa’igtii siisay farriintii ee imaanshaha wiilkeeda. Heesahani waxay ku jireen kuwa soo socda:
“Maryanna waxay tidhi, Naftaydu Rabbigay weynaynaysaa, Ruuxayguna wuxuu ku reyreeyey Ilaaha Badbaadiyahayga ah.Waayo, wuxuu eegay hoosaysnimada addoontiisa, Bal eeg, tan iyo hadhow qarniyada oo dhammu waxay iigu yeedhi doonaan tan barakaysan. Waayo, kan xoogga leh ayaa waxyaalo waaweyn ii sameeyey; Magiciisuna waa Quduus, Tan iyo ab ka ab naxariistiisu waxay gaadhaa Kuwa isaga ka cabsada. Wuxuu xoog ku sameeyey gacantiisa, Oo kuwii fikirradii qalbigoodii ku kibray ayuu kala firdhiyey. Kuwii xoogga lahaa ayuu carshiyadoodii ka soo dejiyey
Oo kuwii hooseeyey ayuu sarraysiiyey. Kuwii gaajaysnaa ayuu wax wanaagsan ka dhergiyey, Kuwii hodanka ahaana iyagoo madhan ayuu diray.
Midiidinkiisii Israa’iil ayuu caawiyey Inuu xusuusto inuu u naxariisto
Ibraahim iyo farcankiisii weligoodba (Siduu awowayaasheennii ula hadlay).
Lukoos 1: 46-55
Waxaad arki kartaa in Maryam, markii lagu wargeliyay in ay heli doono wiil inkastoo iyadu ay ahayd bikrad, waxay u garteen in ay ka dhigan tahay in Rabbigeenna waxaa lagu xusuusto naxariistiisi Ibraahim (Ibrahim) iyo farcankiisa weligiis. Xukumidu ma ahayn macnaheedu in Ilaah uusan mar kale reer binu Israa’iil uusan la joogayn.
Wiilka ay dhashay gabadh bikrad ah ‘waxay diiday waxa xun oo waxay dooratay waxa wanaagsan’
Qaybta cajiibka ah ee wax sii sheegiddan waxa weeye Ishacyaah in wiilkan ‘uu cuni doonaa subag iyo malab markuu ogaado in ku filan oo uu ku diidi karo qaladka oo uu ku dooran karo xaqa’. Waxa Ishacyaah leeyahay waa wiilkani, sida ugu dhaqsaha badan ee uu ku noqdo qaan gaar lehna aqli ku filan si uu u sameeyo go’aan qaadasho miyir qaba, waxa uu ‘Diidi doonaa qaladka oo uu dooran doonaa xaqa.’ Waxaan leeyahay wiil dhallinyaro ah. Waan jeclahay isaga, laakiin si dhab ahaantii in uusan isagu keligii ku diidi karin waxa qaladka ah oo uu ku dooran karo waxa xaqa ah. Xaaskayga iyo aniga waa in aan ka wada shaqeeyna, barnaa, xusuusinaa, waaninaa, barbaarinaa oo tusnaa tusaale fiican, anshixinaa, siinaa asxaab fiican oo suubban, hubinaa in uu u arko asxaab mudan ku dayasho habboon, iwm. In aan barnaa sidii uu u diidi lahaa wax qaldan oo uu u dooran lahaa waxa xaqa ah – Oo xitaa dadaalkayaga oo dhammina oo aannu u soo marnay wax damaanad lahubaayi ma uu jiro. Waalid ahaan, waxaan isku dayay inaan arrintan oo dhan aan u sameeyo, waxaa soo celinayaa xasuus aan carruurnimadaydii markii waalidiintay ay ku lug lahaayeen halganka noloshayda ay isku dayayeen in ay i baraan in aan barto ‘diidida qaladka oo aan doorto xaqa ‘. Haddii waalidku uusan qaadan wakhti intaas le’eg oo uusan gelindadaalkaas dhammaantiis iyo shaqadaas, laakiin ku sii dayso waxa jira waxaa dabcan qaadanaaya dabiiciga markaas taagan – Ilmahaasu wuxuu noqonayaa mid aan ‘diidin qaladka oo aannan dooran xaqa’. Waxay u egtahay in sidii aan ula halgamayno uu ka dhanka yahay ‘cuf iimaaaneed’ halkaasoo sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku joojino dadaalkaas oo dhammu uu ku tagaayo.
Tani waa sababta aan u qufulno guryaheenna irdahooda; waana sababta dal kasta uu ugu baahan yahay ciidan nabadeed; waa sababta aan u leenahay bangiyada xogtooda in aan qarinno oo sir u ahaato qofka xisaabtaas iska leh; oo waa sababta aan had iyo goor u baahanahay sii samaynta sharciyada cusub ee dalalka oo dhan – maxaa yeelay, waxaan u baahan nahay in aan iska ilaalino oo nafteena ka ilaalinno qofkasta maadaama aannan ‘diidid qaladka oo aan dooranno xaqa’.
Nebiyadu xitaa marwalba ma diidaa qaladka oo ma doortaan qaxa
Oo kanu waa run xitaa Nabiyada. Tawreed ayaa diiwaan geliyey in labo jeer Nebi Ibraahim (NNKH) ku been abuurtay naagtiisa ku yidhaahdeen in ay ahayd walaashiis oo keliya (Biloowgii 12: 10-13 & Biloowgii 20: 1-2). Waxa kale oo la diiwaan geliyey in nebi Muuse (NNKH) uu dilay qof Masri ah (Baxniintii 2:12) iyo in hal mar uusan raacin amarka Ilaah (Tirintii 20: 6-12). Nabi Muxammad (NNKH) waxaa lagu amray in uu dambi dhaaf weydiisto quraankan (Surah 47:19) – muujinaya in uusan had iyo jeer diidin qaladka oo uusan dooran xaq marwalba.
Ogow (kuna sugnowNabiyow) inaan Ilaah mooyeen Ilaah kale jirin, una dambi dhaaf waydii naftaada iyo mu’miniinta rag iyo haweenba. Ilaahna waa ogyahay dhaqdhaqaaqiinna iyo nagaadigiinnaaba.
Xadiiskan soo socda ee ka yimid Muslim wuxuu muujinayaa sida ay dadaal ku tukaday dambidhaaf.
Abu Musa Ash’ari ayaa soo weriyey sidaana waxa aabbihiis in Rasuulka Alle (laga yaabaa in nabadgalyo korkiisa ha ahaato) loo isticmaalo in ay erayadan:
“Ilaahoow, dembiyadaydii, aan Jaahilnimo ii geeysay, ii dambi dhaaf in walaacaan oo waxaad ogtahay (arrimahayga) naftayda ku saabsan mid ka badan kaan annigu iska ogahay. Ilaahoow, iga sii agtaada dambidhaaf (Dambiyadayda oo aan annigu galay) dhab ahaantii ama haddii kale (iyo wixii aan u kasayn oo ula kac ah ku samaayey oo intaas oo dhammu (qaladaadkayga) waa igu jirtaa. Illaahoow, iga sii agtaada dambidhaaf qaladka oo aan ku sameeyey dhaqso ama raagtaa, oo aan ka go’an in asturnaanta ama farshaxanka dadweynaha iyo waxaad fiican ka war (iyaga) naftayda ka badan.
Adiguna waxaad tahay hore iyo intii dambeba, oo wax walba ka weyn, adigu waxaad tahay agtiisa ah.”
Muslim 35: 6563
Tani waa arrin aad ula mid ah salaadda Nebi Daa’uud (NNKH) markii uu u tukaday dambi dhaaf dembiyadiisa aawadood:
Ilaahoow, iigu naxariiso sida raxmaddaadu tahay, Oo xadgudubyadaydana igaga tirtir sida naxariistaada badnaanteedu tahay. Xumaantayda iga wada maydh, Oo iga nadiifi dembigayga. Waayo, anigu waan ogahay xadgudubyadayda, Oo dembigayguna hortayduu yaallaa had iyo goorba. Adiga keliya ayaan kugu dembaabay, Oo waxaan sameeyey wax hortaada ku xun, Inaad xaq ahaatid markaad hadashid, Oo aad daahir ahaatid markaad wax xukunto. Bal eeg, aniga waxaa laygu qabanqaabiyey xumaan, Oo waxaa hooyaday igu uuraysatay dembi. Bal eeg, waxaad uurka ka jeceshahay run, Oo meesha qarsoon waxaad iga ogeysiinaysaa xigmad. Haddaba geed husob ah igu daahiri, oo anna nadiif baan ahaan doonaa, i maydh, oo anna baraf cad waan ka sii caddaan doonaa. I maqashii farxad iyo rayrayn, Inay lafihii aad jejebisay farxaan. Wejigaaga ka qari dembiyadayda, Oo iga tirtir xumaatooyinkayga oo dhan.
Oo waxaynu aragnaa in nimankanu – in kastoo ay yihiin nebiyadii – halgankooda dembiyadooda oo ay u baahdeen in ay waydiistaan dambidhaaf. Tani waxay u muuqataa in xaaladani kawada simman yihiin aadanaha oo dhan – durriyadii Nebi Aadan.
Wiilka Quduuska ah ee gabadh bikrad ah dhashay
Laakiin wiil kan uu sii sheegeen Ishacyaah uu diiday khaladka oo uu doortay xaqa dabiiciga ah markiiba ka da’diisii hore. Waa dareen isaga xagiisa ah. Si ay taasu ku suurtowdo waa inuu yahay dhalasho ka duwan. Dhammaan nebiyada kale, waxay awowayaashood, ka soo jeedaan Ibraahim oo ay ku abtirsadaan, oo ma uusan ‘diidid khaladka oo ma dooran waxa wanaagsan’ sida aan aragnay. Sida ab ka ab maraa nooca aabbihiis farcankiisa, sidaas dabeecadda caasinnimo ee Aadan oo aan dhammaanteen ka dhaxalnay qofkasta oo innaga mid ahi xitaa nebiyadii. Laakiin wiilka ka dhashay bikradnimadda hooyadiis, qeexitaan ahaan, ma uu ku abtirsan karo Aadan xagga Aabbihiis. Waalidka dhinaciisa wiilkan wuxuu noqonayaa mid kala duwan, oo sidaas waa in uu quduus ku ahaadaa. Tani waa sababta Quraanka, markaas muhiimada fariinta malaa’igta ku saabsan Maryam wiilkeeda bikrad-ku dhashay, ugu yeedhay wiilkii ‘quduus’
Kuna yidhi anigu waxaan uun ahay rasuulka Eebahaa inaan ku siiyo wiil daahir ah. Waxayna tidhi side iigu ahaan wiil anoosan i taaban dad, ahaynna mid xun (la tuhmo). Wuxuuna yidhi waa sidaas, wuxuuna yidhi Eebahaa wuu u fudud yahay korkayga iyo inaan uga yeello calaamad dadka iyo naxariis xagayga ah waana arrin la xukumay (dhammeeyey). Way xambaartay (uurowday) waxayna u fogaatay mel dheer (durugsan).
Maryam 19: 19-22
Nabi Ishacyaah (NNKH) wuxuu ahaa mid war cad, iyadoo Kutubtii ka dib xaqiijiyeen – waxaa jiri doona wiil soo dhalan doonaa oo ay dhali gabadh bikrad ah, sidaas aan lahayn aabbe uunka ku nool, oo ma uusan lahayn dabeecadda dembiga, oo sidaas ku noqon doona Quduus.
Dib u eegid Aadan iyo Jannada
Laakiin ma’ahan oo keliya buuggaagtii dambe ka hadleen imaanshaha wiilka gabadha bikrada dhashay. Waxaa sidoo kale halkaas joogay tan iyo biloowgii. Waan ku aragnay Calaamadaha Aadan in Ilaah ka hadlay ballanqaadkiisii iyo shaydaan. Waxa aana halkan ku soo celiyaan.
“Oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa.” (Biloowgii 3:15)
Ilaah baa fakirilahayd in Ibliis/Shaydaan iyo dumar labadaba yeelan doontaa “farcan ‘. Waxaa jiri doonaa ‘colnimo’ ama isnac u dhexeeya farcankaaga iyo naag iyo Shaydaan. Shayddaan baa ku ‘dhufan doonaa cedhibta’ farcankii naagta halka farcankii naagta ‘burburin doonaa madaxa’ Shaydaanka. Xiriirkan waxaa laga arki karaa jaantuskan hoosta ka muuqda.
Fadlan xus oo la soco in Ilaah aanu weligeed ninna u ballanqaadin faraciisa sida uu ugu ballanqaaday naagta. Tani waa arrin aan caadi ahayn, gaar ahaan sida loo siiyey xoojinta wiilasha soo socda iyada oo loo marayo awowayaashii, Tawreed, Sabuur & Injiilka (Kitaabka/ Quduuska ah). Dhab ahaan, mid ka mid ah waxyaabaha lagu eedeeyo ee ay ku eedeeyaan nimanka reer galbeedka casriga ah waa in ay iska indhatireen abtirsiga loo marayo haweenka. Waa ‘xaqiraad’ Indhahooda sababta oo ah waxa kaliya oo la tixgelinayaa waa aabbe-tirsiga binu-aadmiga. Laakiin kiiskan waa kala duwan yahay – ma uusan jirin ballanqaad farcan ah ( ‘asaga’) ka imaanaya nin. Waxa uu leeyahay oo kaliya in ay jiri doonaan farcankaaga ah ka soo baxaya naagtii, oo aan sheegin nin.
Ishacyaah ‘wiilka gabadha bikrada dhashay’ WAA ‘farac dumar’
Haddaba marka laga eego Ishacyaah ee wax sii sheegistiisa in wiil ay dhali doonto gabadh bikrad ah waa ay iska cadahay in waxa loogu tala galay xataa muddo dheer ka hor janada ahaa in faraca (wiilka) ka iman doona qof dumar ah oo kaliya (sidaas bikrad ah). Waxaan idinku boorinayaa in aad dib u noqotaan oo aad akhrisaan doodan ee Calaamada Aadan dhinacaasi aad ka arki doontaa in ay tahay mid ku ‘habboon’ . Dhamaan wiilasha Aadan tan iyo biloowgii taariikhda la kulmay dhibaato la mid ah hadii aysanba ‘diidayn qaladka oo aysan dooranayn wuxuu yahay xaqu’ sida awowgeen Aadan sameeyey. Markaasaa Ilaah, xaq ka dibna marka dembiga dunida uu yimid, sameeyey ballanqaad qarsoon in qof quduus ah oo aan ka iman Aadan ayaa iman doono oo uu ‘burburin doono’ Shaydaanka madaxiisa.
Laakiin sidee buu wiilkan quduuska ah u samayn doonaa? Haddii ay ahayd in fariin siinayo ka timid xaga Ilaah, nebiyada kale sida Ibraahim iyo Muuse (NNKH) ayaa iyagoo daacad ah gudbiyey fariimihii loo soo dhiibay. Maya, doorka wiilkan quduuska ah waa ka duwanaa, laakiin si aan u fahamno waxaan u baahan nahay in aan sii sahminaan Sabuur.
Tags:dhalashada bikradda ahayd ee Ishacyaahdhalashada bikradda ahayd ee MaryamIsa al Masih iyo dhalashada bikradda ahIsa in zaburNebi Ishacyaahnebiyadii zaburoo ahaa Ishacyaah ina?Suurat At-Taxriimwaxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Isa ?waxaa Isa dhashay ee bikrad ah